Geza ushizi ekhaya: iresiphi ngesithombe. Ukulungiswa kwe-Adyghe ushizi owenzelwe ekhaya kanye nesitoreji sawo.
Indlu yasekhaya Ukupheka Ukuncintisana
Iresiphi elula yokupheka ushizi u-Adygei ekhaya.
I-adyghe ushizi isakhi esivelele sesintu. Akuyona nje umkhiqizo omuhle ongenasici, kodwa futhi uyasiza kakhulu emzimbeni. I-calori ephansi futhi inenambitheka encane, engabonakali, kodwa ehlanjululisiwe. Yilokho okudingayo ngesikhathi sokudla. Ngaphezu kwalokho, i-Adyghe ushizi ifana ngokuphelele nabesifazane abakhulelwe, izingane nabantu abanezinkinga ze-musculoskeletal, ngoba liqukethe inani elikhulu le-calcium.
I-adyghe ushizi ingathengwa hhayi esitolo kuphela, kodwa futhi ilungiselelwe ngokuzimela. Lokhu kuqinisekisa ukuthi zonke izithako zihlanzekile futhi azikho izithasiselo. Sikunikeza iresiphi elula ye-Adyghe ushizi, futhi wabelane ngemfihlo ethile yokuthi ungayilondoloza kanjani kahle esiqandisini.
Iresiphi ye-Adyghe ushizi ekhaya
Ukuze ulungiselele ushizi odinga ukuthatha:
2 amalitha ebisi elenziwe ngokwenza
Izinkomishi ezingu-3 ze-yogurt, ubisi olukhishiwe noma amasondo (noma yimiphi yale mikhiqizo izokwenza)
Ubisi oluzenzelayo lungashintshwa futhi lugcine, lugciniwe. Yiqiniso, singakukwazisa ukuba uthathe ekhaya, uma kukhona ithuba elinjalo. I-Kefir nayo ingenziwa ekhaya, kodwa ingase ibonakale ibiza kakhulu, ngakho-ke sisebenzisa i-kefir evamile kusuka esitolo samafutha amaningi kakhulu.
Thelela ubisi epanini bese ulibeka emlilweni.
Yilethe emathumba bese wengeza i-yogurt.
Hlanganisa ingxube ngokuqhubekayo kuze kube yilapho i-curd flakes iqala ukuvela. I-Serum kufanele ivuleke, futhi ama-flakes azowa phansi.
Manje udinga ukuthatha i-colander uphinde uthule inqwaba ephuma kuyo, ngaphambi kokugqoka i-gauze (ungasebenzisa ifomu elikhethekile lokwenza ushizi).
Manje faka ikhanda leshizi, ubophe i-hard gauze bese ubeka into enzima phezu kwalo. Ukuze wenze lokhu, ungasebenzisa imbiza evamile yamatitha amathathu.
Shiya ushizi kule ndawo ngamahora angu-10-12. Phakathi nalesi sikhathi, wonke ama-drain whey.
Manje lungisa isisombululo saline. Ukuze wenze lokhu, qeda i-tbsp encane. l. usawoti ku-1 litre. amanzi. Gcoba ikhanda leshizi kuyo izinsuku ezingu-2-5.
Uma uhlela ukugcina ushizi isikhathi eside, amanzi nosawoti kufanele aphekwe ngaphambili.
Uma ufuna ukunambitheka okucebile, shiya izinsuku ezimbili efrijini.
Indlela yokugcina ushizi esiqandisini?
Yiqiniso, izinsuku ezimbili ukugcina ushizi, lokhu akuyona umkhawulo. Ngendlela efanele, izohlala ihlanzekile isikhathi eside. Kubalulekile! I-Stale Adyghe ushizi iyashintsha umbala, ithole umthunzi ophuzi noma ukhilimu, futhi ibuye ishintshe iphunga layo ngandlela-thile. Ukuze uyigcine uhlanzekile, faka ikhanda kwisitsha esivaliwe. Okungcono, isitsha noma iphakheji ye-vacuum izokwenza, kodwa ingashintshwa yibhange elivamile, into esemqoka ukuyivala ngokuqinile. Ngakho-ke, ungakwazi ukunweba impilo yasheluli inyanga eyodwa. Okungaphezulu kungadluliselwa ngokufafaza i-Adyghe ushizi ngosawoti omkhulu noma ngokuphindile kancane.
I-Adygei Cheese esuka ku-Purchased Milk - ividiyo
Geza kusuka isikhuphaphu seqanda
Amanki anyanisi e-Crispy
I-Marinated Cheese Tofu
Indlela yokupheka izikhumba ekhaya?
Ukunwetshwa koNyaka Omusha 2017 - zokupheka ezilula futhi okumnandi ngezithombe. Ama-appetizers abandayo abandayo nabashisayo we-Rootster ka-2017
Pie nge strawberry, rhubarb ufafaze
Ubisi nezithelo ze-smoothies
Ukulwa nokushintsha njalo kwendoda
Iningi lokuqala lihalalisela ngomshado evesini naseprose
Isigubhu saseFrance esinama-cheese
2010 unyaka we-tiger. Yini okudingeka ukwazi ngaye?
Ingaphakathi langaphakathi lendlu yezwe
Indlela yokukhetha i-caviar efanele
Ukuhlukumeza okungalungile ku-aesthetics ye-liposuction
I-yogurt kanye neminye imikhiqizo yobisi enempilo
Izinzuzo nokungalungi kokumaketha kwenethiwekhi
Izinja ezishisayo ezenziwe kusukela kufulawa lwamafutha ngenduku
Ukukhipha isisu emva kokulala